झण्डै दुइ करोडले हेरिसकेको भिडियोमा यि यु’वतीले के गर्दैछिन ? हेर्नुहोस – – Life Nepali
झण्डै दुइ करोडले हेरिसकेको भिडियोमा यि यु’वतीले के गर्दैछिन ? हेर्नुहोस –
निकै नै सुन्दर एक युवतीको बाथरुम भिडियो संसारभर भाइरल बनेको छ । ति युवतीले बाथरुममा छिरेपछि के-के गरिन्, त्यो सबै एक गो’प्य क्या’मेरामा कै’द गरिएको थियो । के छ भिडियोमा ? एक यु’वती बा’थरुममा प्रवेश गर्छिन् । ढोका बन्द गर्छिन् । त्यसपछि पालैसँग तल-माथिको दुवै कपडा खोलेर झुण्ड्याउँछिन् । अब उनको श’रीरमा ब्ल्याक वान पिस ड्रेस मात्र बाँकी रहन्छ । त्यो पनि खोल्न लागेजस्तो गर्छिन् ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
त्यत्तिकैमा उनले ए’क्कासी क्यामेरामा हेरेर भन्छिन्, ‘तपाईं मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ नि होइन ? सायद केहीको प्रतिक्षा गर्दै हुनुहुन्छ । तपाईं जे का लागि प्रतिक्षा गर्नुभएको हो, त्यो नहुँदासम्म कु’र्नुहुन्छ नि होइन ? तर त्यो हुँदैन । केही हुँदैन । सबैभन्दा पहिले म यो ट्याब (धारो) बन्द गर्छु । यहाँ पानी खेर गइरहेको छ ।’ अनि उनले पानी खेर गइरहेको धारो बन्द गर्छिन् । जनचेतना फै’लाउने उनको यो शैली गज्जबको छ ।
पानी मानिसका लागि निकै महत्वपूर्ण छ । यसले व्यर्थमा खेर जान दिनु हुँदैन भन्ने सन्देश यो जनचेतनामूल भिडियोले दिन खोजेको छ । भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
Previous विवाह गर्नुअघी आफ्नो जो’डिलाइ सोध्नै पर्ने ३ कुरा ! ( सबैले जानी राखौं )
Next भर्खरै कुवेत बाट नेपाली यु’वतिको हे’र्नै न’सक्ने भि’डि’यो बा’हिरियो (भिडियो सहित)